Charcoal Mahwendefa Ezvinonhuhwirira Mwenje Mwenje Matafura Mahara Disk Mwenje 35 mm Resin Burner Rolls Pack ye 120 Mazimbe Briquettes Charcoal Burner Instant Moto Coal Tablet
Marasha Mahwendefa Ezvinonhuhwirira- Kurumidza Mwenje Makara Mahwendefa - Marasha Disk Mwenje - 35 mm Resin Burner Rolls - Rongedza 120 Mazimbe Briquettes - Marasha Burner - Pakarepo Moto Marasha Hwendefa
Pasuru Dimensions: 7 x 5.5 x 3.1 Inch
Item Kurema: 1.82 Pondo
Item Fomu: Mahwendefa
Nguva Yakareba: 0,75 Maawa
Pamusoro peichi Chigadzirwa
Chiitiko Chitsva:Kunakidzwa nezvinonhuwira zvako zvekunakidza zviri nyore nematafura edu anoshamisa emarasha! Ivo vanovhenekesa kanenge pakarepo uye vanounza inononoka kupisa iyo inogara kwemaminitsi makumi mashanu nemashanu.
Natural Coal: Makarari edu emarasha anogadzirwa ne100% yemusango muchero muti. Mahwendefa emarasha haana hwema uye haana hwema, izvo zvinokutendera kuti unakirwe nehupfumi hwakawanda hwezvinonhuwira zvako.
Yakakura Pack: Iyo seti inosanganisira gumi rolls ane gumi makapisi imwe neimwe. Mazimbe emwenje anokurumidza ane 33 mm kana 40 mm dhayamita. Ivo vakanakira kupisa zvinonhuwira, zvichikubvumidza iwe kuzorora uye kunakidzwa zvizere neruzivo.
Smooth Flame:Mafuta edu ezvinonhuwira marasha ane mwenje wenguva dzose uye wakatsetseka. Vanogona kuvhenekerwa nekukurumidza uye pasina simba vachishandisa chete machisi kana kujekesa. Imwe chete inokurumidza mwenje marasha briquette inogona kupisa kwemaminitsi makumi mashanu nemashanu.
Multipurpose: Aya marasha marasha akakosha pakupisa zvinonhuwira. Iwe unogona zvakare iyo resin yezvinonhuwira yemarasha mheni ye aromatherapy, SPA, uye kurapwa kweTurkey. Iyo yakasimba uye haina makemikari kana chepfu.
Runyararo Rwepfungwa: Vhenekera marasha ako, gara pasi, uye uzorore! Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitaura nezvenyaya yacho neyedu chigadzirwa, svikira kune 30 zuva
Yedu Charcoal Ndiyo Yakanyanya Kukosha Deal: 120 marasha emadhiza padanho rega! Isu takagara tichipa akanakisa marasha emhando yepamusoro kumakumi ezviuru zvevatengi vakatendeka veAmazon kwemakore.
Kugutsikana Kwevatengi:Isu tine chivimbo chekuti iwe unozofadzwa nehunhu hweanoshamisa einonhuwira anopisa zvinonhuwira. Vatengi vedu ndiyo yedu yekutanga nhamba yekutanga, ndosaka tichivimbisa rutsigiro rweprimiyamu uye 30-zuva rekudzoserwa mari-rekudzoserwa kwekutenga-isina njodzi.
Pashure: Darkelves Doro Wax Solid Kusvirwa Resistant Doro Vira Diki Hot Hot Pot Solid Mafuta Fuel Inoomarara Solid Doro Bhururu Inopisa Inodzivirira
Zvadaro: Chicken Gumbo Wing Rack 14 cheap car insurance Stainless simbi Roaster Mira With Drip tireyi For Smoker Grill Kana hovhoni, Dishwasher Safe, Non-Stick, Great For Bbq, Picnic
Makara Kune Hookah
Hookah Mazimbe Iran
Kurumidza Premium Hookah Makala
Shisha Hookah Makara
Darkelves Makara Mahwendefa Ezvinonhuwira Zvinononoka Bur ...